စူးနှယျလေး February 27, 2014 7:37 AM
ဟယ် အဲသလောက် တောင်မှ ပဲလား မမီး :D
မီးမီးငယ် February 27, 2014 9:55 AM
San Htun February 27, 2014 8:45 PM
မမီးတို့အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝက ပျော်စရာကြီး..ရေးဟန်က ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းရဲ့စုံထောက်မောင်စံရှားဝထ္ထုလို..:D
မီးမီးငယ် February 28, 2014 8:06 AM
Anonymous February 27, 2014 9:41 PM
ဟားဟား..မီးမီးဇာတ်လမ်းကတော့လေ...ရင်သိမ့်တုန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။း) မျက်နှာကိုခေါက်ပြီးသေတ္တာထဲသိမ်းထားတော့ငါးခြောက်ဘူးလေးနဲ့ တူတူဆုိုတော့အခန်းကျော်စရာလိုတော့ဘူးးပေါ့။ ဟဲ..ဟဲ..
မီးမီးပြောသလုိုဘဲငါးပိကြော်ဘူး၊ငါးခြောက်ကြော်ဘူး။ လက်ဖက်ဘူး..အစုံဘဲအိမ်ကပြန်လာရင်သယ်လာတာ။ ကုိုယ်ကရန်ကုန်ကဆုိုတော့သိပ်တော့မရှားဘူး။ချစ်ချစ်ကလည်းကြုံရင်ကြုံသလိုဝယ်ဝယ်လာပေးတယ်။ အကိုတွေကလည်းလာပို့ တယ်။ ကုိုယ်တုို့ အဖွဲ့ မှာတနလာင်္နေ့ ဆုိုမြိုင်နေတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့အစားအသောက်မီးလိုတောက်တဲ့အဖွဲ့ ဆုိုတော့မကြာဘူးကုန်တာဘဲ။ ကုိုယ့်ပုလင်းတွေကအမြဲအရင်ကုန်တယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့ ကကျစ်ကျစ်လစ်လစ်သိမ်းထားပြီးစားတော့အမြဲစုိုစုိုပြေပြေရှိတာပေါ့။ ကုိုယ်ကတော့တွေ့ သမျှရှိသမျှလူကျွေးတော့ရက်တော်တော်များများကသူများပုလင်းတွေကုိုသွားရည်ကျနေခဲ့ရတာ။ တချို့ ကသူများဟာတော့စားချင်တယ်။ ကုိုယ့်ဟာကျတော့မရှဲချင်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ရှယ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအများစုကလည်းအမြဲပြတ်နေကြတာဘဲ။း)
မီးမီးငယ် February 28, 2014 8:14 AM
AMK February 27, 2014 9:43 PM
ရီလိုက်၇တာ တီတီမီးရယ် နောက်ဆုံး အလုတ် ကို မြို ချလိုက်လားဟင်
မီးမီးငယ် February 28, 2014 8:15 AM
ဟား..ဘာရမလဲ မြိုချတာနဲ့ စကားပြောတာနဲ့၊
ဟန်ကြည် February 28, 2014 10:18 AM
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ဘလော့ခေါင်းစဉ် ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်...ဒေါ်မီးမှ ဟုတ်ပါလေစလို့...ရေးဟန်တွေက ပြောင်းနေတာကိုးဗျ...ကျွန်တော်တော့ အရင်တုန်းက ရေးဟန်လေးကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျာ...အခုဟာကလည်း ကောင်းတော့ကောင်းတာပါပဲ...ရင်းနှီးပြီးသား လေသံမဟုတ်တော့ တစ်မျိုးကြီး...
သူခိုးလူမိတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့ ကျောင်းသားဘ၀တစ်လျှောက် ခဏခဏပဲဗျို့...နောက်များတော့ ခိုးမစား ၀ှက်မထားရဲတော့တဲ့အထိ...း)
မီးမီးငယ် February 28, 2014 10:45 AM
Anonymous March 02, 2014 5:54 PM
Yoս can сertainly ѕee your eոthusiasm wіthin the work yօu
writе. The arеna hopes for more passionate writers such as yοu who aгe not afrɑid to meոtion how thеy believe.
Anonymous March 02, 2014 9:14 PM
Daw Mie Yae,
Great ! Your post make me laugh inside my office at working hours......
And remind me my old days.......
မီးမီးငယ် March 04, 2014 7:05 AM
I can make you laugh in the morning time at work!!
So that all day you got good mood ..right :P
I wish you too... haveagreat time forever...